Chii chinonzi Dual Factor Kusimbiswa muIOS 9 uye OS X El Capitan | IPhone nhau
Chii chinonzi Dual Factor Kusimbiswa muIOS 9 uye OS X El Capitan
iOS 9 ichaunza shanduko munzira dzekuchengetedza idzo Apple inotipa isu pamidziyo yedu uye nekuchengetedza kwedu zvakavanzika ruzivo. Iyo Yechipiri-Nhanho Verse iyo iwe yawakaunza zvishoma pamusoro pegore rapfuura ichave "Mbiri-Chechipiri Kusimbisa". Kunyangwe masystem maviri achitsvaga chinangwa chimwe chete, "kuchengetedza account yako yakachengeteka kunyangwe kana mumwe munhu akagona kubata password yako", Iwo maviri masystem ane akakosha misiyano uye ndizvo zvatiri kuzotsanangudza muchinyorwa chino.
1 Iyo 'yekare'-nhanho yekusimbisa
2 Iyo nyowani mbiri-chinhu chokwadi
3 Ko kana ndikarasa mudziyo wangu wekuvimba?
4 Ko kana ndikarasawo password yangu?
5 Ini ndinofanira kushandisa iyo nyowani system izvozvi?
6 Ndiani achakwanisa kuwana iyo nyowani system?
Iyo 'yekare'-nhanho yekusimbisa
Apple yazvino-Nhanho Verification inoreva kuti chero shanduko dzakaitwa kuaccount yako, pamwe nechero zvigadzirwa zvitsva zvakawedzerwa pairi, iwe unogara uchida kusimbiswa kubva kune yakavimbika kifaa. Saka kana mumwe munhu achida kuwana yako account kubva kubhurawuza isina kumbobvira yaita zvakadaro, kana kuda kuwedzera yako iCloud account kune chitsva kana ichangodzoreredzwa chishandiso, zvinogona chete kuitwa kana, pamusoro pekupinda iyo yekuwana data (zita rekushandisa uye password ) Iwe zvakare nyora kodhi inotumirwa kune yakavimbika kifaa iwe yawakambo gadzira.
Iyo yakakurudzirwa zvikuru yekuchengetedza michina, nekuti nenzira iyi hapana anokwanisa kuwana account yako pasina mvumo yako kunyangwe ne password yako, asi yaive nechikanganiso chakakosha: kana uchinge warasikirwa nekiyi nemidziyo yakavimbika panguva imwe chete, zvinodikanwa kuti uve nekiyi yekudzoreredza iwe newe chete, kunyangwe Apple inogona kuzviita. Ukarasikirwa nekiyi yekudzoreredza, unogona kunyora account yako zvachose. Ichokwadi kuti mamiriro ezvinhu kuti akawanda mamiriro ezvinhu anofanira kuitika pamwe kuti zviitike, asi zvinokwanisika kuti zvinoitika, uyezve vamwe vashandisi vakanyunyuta nezvazvo.
Iyo nyowani mbiri-chinhu chokwadi
"Two Factor Authentication" ichatsiva chekare-nhanho yekusimbisa kutanga neIOS 9 uye OS X El Capitan. Chaizvoizvo iwo mafungiro akafanana ne "Maviri-Matanho Verification", asi yakavandudzwa, ne yakanyanya kutwasuka uye mushandisi-inoshamwaridzika sisitimu iyo inogona kubata avo madhiraivhu kubva kune chero iPhone, Mac kana iPad kuti iwe wakasangana neakaundi yako, uye izvo zvakare zvinopa nekiyi yekudzosa.
Iko mashandiro akafanana: paunenge uchizowana account yako kana kuwedzera chishandiso chitsva, unofanirwa kuwedzera password yaunowanzoshandisa kodhi-nhamba nhanhatu iyo yaucharatidzwa kwauri pane chero chishandiso chawakatowedzera kuaccount yako. Kana iwe usina mudziyo uripo, unogona kugara uchigamuchira kodhi yacho kuburikidza neSMS kana nekufona. Iwe uchafanirwa chete kuita izvi kekutanga, kubva kubva panguva iyoyo pachigadzirwa icho chichava "chivimbo" kusvika iwe uchichiidzorera.
Ko kana ndikarasa mudziyo wangu wekuvimba?
Kana iwe usina mudziyo unovimbwa iwe unogona kugara uchigamuchira aya makodhi ekuongorora neSMS kunhamba yefoni yawakabatana neakaundi yako se "Inovimbwa nhamba yefoni". Nenzira iyi iwe unogona kuramba uchiwana account yako kunyangwe iwe usina chero chishandiso neakaundi yako iCloud iripedyo. Ehezve, zvakakosha kuti iyo nhamba yefoni iite-ye-kudhara, uye kuti kana iwe ukachinja iyo nhamba unoishandura iyo pakarepo muakaundi yako yeApple.
Ko kana ndikarasawo password yangu?
Muchiitiko chiri kure chaunorasikirwa nemidziyo yako yese uye usingazive yako iCloud kiyi (chimwe chinhu chisina kukurudzirwa) haufanire kutendeukira kune chero yakasarudzika-yakavanda yekudzosa kiyi. Unogona kutaura Apple uye kukumbira kupora kweakaundi yako. Mushure mekusimbisa kuti iyo account ndeyako chaizvo, mushure memazuva mashoma umo kesi yako ichadzidzwa zvakadzama, iwe uchagamuchira iyo nyowani yekuwana data kuitira kuti account yako isavharwe zvachose.
Ini ndinofanira kushandisa iyo nyowani system izvozvi?
Apple haikurudzire kuti iwe ushandise iyi nyowani Two Factor Authentication system kudzamara zvishandiso zvako zvese zvagadziriswa kuIOS 9 uye OS X El Capitan. Kuva nemidziyo yekare muIOS 8 kunogona kukonzera kuti vatadze kugamuchira macode ekuongorora kubva kuchirongwa chitsva (kunze kweSMS) uye kodhi yekumisikidza hayaigona kupinzwa mumidziyo "yekare" sezvaitarisirwa, zvinozoita kuti ive maitiro anonetesa zvekuti anogona kukupa iwe misoro yakawanda. Chinhu chakanakisa ndechekuti usashandise iyo nyowani sisitimu kudzamara zvishandiso zvako zvese zvagadziriswa, zvirinani ndizvo zvinokurudzirwa naApple.
Ndiani achakwanisa kuwana iyo nyowani system?
Apple haizokwanise kuita kuti system iwanikwe kune wese munhu ane iOS 9 uye OS X El Capitan yakaiswa. Zvichawedzera zvishoma nezvishoma vashandisi, uye ichave iye mushandisi anogamuchira, mune yekugadzirisa dhizaini maitiro, angave kana kwete ivo vachida kuchinjira kune iyo nyowani system. Kwekanguva masisitimu maviri ekuchengetedza achagara pamwe chete, kusvikira zvese zvave kugadzirira kutamira kune nyowani Two Factor Kusimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Chii chinonzi Dual Factor Kusimbiswa muIOS 9 uye OS X El Capitan
Kadhi Hondo - Yekushanya Nguva App yeVhiki
GoPro Hero4 Session maviri akakura neiyo iPhone yako